Who were Bengali, so called Rohingya?: ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားဟုတ်သလော။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းသို့ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ၍ တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာကြသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားများ
by ကြယ် စင် လင်း on Monday, 17 October 2011 at 10:53 Facebook မှ ကူးယူတင်ပြပါသည်။
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 3:39 PM
WE MYANMAR NATIONS, TIME TO BE UNITED. THE BLOGGER, PLEASE UPDATE THE LATEST NEWS.
A MYANMAR CITIZEN TO PROTECT OUR NATIONS
TO THE WRITER, THIS IS GOOD FROM ONE PO